दाङमा स्कुल बसले ठ’क्क’र दिँ’दा दुई वर्षीय बालक को मृ,त्यु, परिवारमा रु,वाबासी ! - ABNews Nepal
दाङमा स्कुल बसले ठ’क्क’र दिँ’दा दुई वर्षीय बालक को मृ,त्यु, परिवारमा रु,वाबासी !
Dec 15, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, dhamala ko hamala, headline nepal, katathmandu news, latest khabar, latest nepal, latest ramailo samachar, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
दाङमा स्कुल बसले ठ’क्क’र दिँ’दा एक बालकको मृ,त्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका–६ अगेरा निवासी रोहित पाण्डेको दुई वर्षीय छोरा आहाना पाण्डेको मृ,त्यु भएको हो ।
सोही ठाउँबाट विद्यार्थी लिएर अगेरातर्फ आउँदै गरेको ना३ख ९९९३ नंको बसले सोमबार बिहान सवा १० बजे ठ’क्क’र दिँ’दा ग’म्भी’र घाइते भएका बालकको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा ल्याएलगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उनको टा’उ’कामा ग’म्भी’र चो’ट ला’गे’को थियो । ठ’क्क’र दि’ने बस बबई स्टार लिटिङ बोर्डिङ स्कुलको रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
यो पनि, विभिन्न योजनाका लागि रु पाँच करोड माग- तनहुँको भिमाद नगरपालिकामा रु पाँच करोडका योजना माग गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भिमाद नगर कमिटीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई सोमबार मागपत्र बुझाउँदै विभिन्न योजनाका लागि बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेको हो ।
नगर कमिटीका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले विभिन्न दश योजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकका ६, खानेपानीका दुई, बाँध निर्माण र पहिरो नियन्त्रणका एक÷एक योजनामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । भिमाद नगरपालिकाअन्तर्गत भिमाद भागर मोटरमार्ग स्तरोन्नति, बगैँचा पोखरीडाँडा सडक ढलान, दैकेडाँडा खानापानी आयोजनालगायतका योजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ ।
तनहुँका नेताहरू हेमराज लामिछाने (क्षितिज), ओमराज आले (मदन), अतिन्द्र केशरी न्यौपाने, गीता शाही, सूर्यबहादुर गौली, रामबहादुर थापा, सर्वदा खनाल, मुक्ति सिग्देल, विकास श्रेष्ठ, विद्या क्षेत्री, सृजना सिग्देल, दिनेश गौतम, दिपक पन्त, शुक्र चुमान, खुम बहादुर विक, दिलबहादुर नेपाली, पूर्णसिंह थापा, भिमबहादुर राना, करुणा गुरुङ, जौ माया विक र देविका बुर्जा मगर चयन हुनुभएको छ ।
हस्तीहरुको टिमअप : राहत, पलकदेखि अंकितसम्मले गाए गीत
भुपेन्द्रका आमा बुबाले नवीन रावलको होटलमा हमला गरेपछि यस्तो सम्म भयो